2 Samoela 22 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865]
&nbspka hoy izy: Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy,
&nbspAndriamanitra vatolampiko, Izy no ialofako, Ampingako sy tandroko famonjena Izy ary fiarovana avo ho ahy sy fandosirako; Ry Mpamonjy ahy, mahafaka ahy amin'ny fampahoriana Hianao.
&nbspMiantso an'i Jehovah Izay mendrika hoderaina aho, Ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko.
&nbspFa nihodidina tamiko ny onjan'ny fahafatesana. Ary ny riaky ny faharatsiana nampahatahotra ahy.
&nbspNy famatoran'ny fiainan-tsi-hita nihodidina tamiko, nisakana ahy ny fandriky ny fahafatesana.[Heb. Sheola]
&nbspFony azom-pahoriana aho, dia niantso an'i Jehovah, eny, Andriamanitro no nitarainako; nihaino ny feoko tao an-tempoliny Izy, ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny.
&nbspDia nihozongozona sy nihorohoro ny tany, ary ny fiorenan'ny lanitra nihorohoro, eny, nihozongozona ireo, satria tezitra Jehovah.
&nbspNisy setroka nisavoana teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevona ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy.
&nbspDia naondriny ny lanitra, ka nidina Izy; Ary aizim-pito no teo ambanin'ny tongony.
&nbspDia nitaingina kerobima Izy ka nanidina, eny, niseho teo amin'ny ela-drivotra Izy.
&nbspEfa nanao ny maizina ho tranony manodidina Azy Izy, dia fivorian-drano sy rahona matevina
&nbspAry avy teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany nisy vainafo nidedadeda.
&nbspDia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, ny Avo Indrindra niloa-peo.
&nbspDia nandefa zana-tsipìka Izy ka nampiely ny fahavaloko, ary nampandeha helatra ka nampifanaritaka azy.
&nbspDia hita ny fitoeran-dranomasina, ary niseho ny fanambanin'ny tany, noho ny teny mafy nataon'i Jehovah, noho ny fifofofofon'ny fofonain'ny vavorony.
&nbspNaninjitra ny tànany avy tany ambony Izy ka nandray ahy; nanintona ahy niala tamin'ny rano be Izy.
&nbspNamonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery Izy sy tamin'izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny.
&nbspNisakana ahy tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho Mpanohana ahy.
&nbspDia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka Izy; namonjy ahy Izy, satria tiany aho.
&nbspNanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; Araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy.
&nbspFa nitandrina ny lalan'i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro;
&nbspNy fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako;
&nbspTsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon'ny fahotako;
&nbspKoa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony.
&nbspNy olona tsara no isehoanao fa tsara; Ny tena olo-marina no isehoanao fa marina;
&nbspNy madio no isehoanao fa madio; Ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina.[Heb. miolakolaka]
&nbspFa ny olona ory dia vonjenao; Fa ny masonao manandrina ny mpiavonavona, ka aetrinao ireny.
&nbspFa Hianao no jiroko, Jehovah ô; Jehovah mampahazava ny fahamaizinako.
&nbspFa Hianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; Ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda.
&nbspRaha ny amin'Andriamanitra, dia marina ny lalany; Ny tenin'i Jehovah dia voazaha toetra amin'ny memy; Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy.
&nbspFa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika?
&nbspIzany Andriamanitra izany no fiarovana mafy ho ahy; Mitondra ny marina amin'ny lalany Izy.
&nbspAry manao ny tongony ho tahaka ny an'ny dieravavy Izy; Mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo Izy.
&nbspMampianatra ny tanako hiady Izy, ka mahahenjana tsipìka varahina ny sandriko.
&nbspOmenao ahy ny ampingan'ny famonjenao; Ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy.
&nbspHalalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny hato-tongotro.
&nbspManenjika ny fahavaloko aho ka mandripaka azy; Ary tsy mba miverina aho mandra-pahalany ritrany.
&nbspMandringana sy mandripaka azy aho, ka tsy maharina izy; Lavo eo ambanin'ny tongotro izy.
&nbspHianao mampisikina ahy hery hiady; Aripakao ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy.
&nbspAry ataonao miamboho ahy ny fahavaloko; Ka aringako izay mankahala ahy.
&nbspMiherikerika izy, fa tsy misy mpamonjy, eny, maniry an'i Jehovah izy, fa tsy mamaly azy Izy.
&nbspTorotoroiko madinika tahaka ny vovo-tany izy; Hoseko tahaka ny fotaka eny an-dalana izy ka apariako.
&nbspMamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny oloko Hianao sy miaro ahy ho lohan'ny firenen-tsamy hafa; ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy.
&nbspNy hafa firenena mikoy ahy; Raha vao mahare ny lazako fotsiny ihany aza izy, dia manoa ahy.
&nbspNy hafa firenena dia mihaketraka ka miala amin-kovitra avy ao amin'ny fiarovany mafy.[Izahao Sal. xviii.46. Ny dikan'ny teny Hebreo eto dia misikina avy ao, etc]
&nbspVelona Jehovah; isaorana anie ny Vatolampiko; Asandratra anie Andriamanitry ny vatolampy famonjena ahy,
&nbspDia Andriamanitra, Izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy,
&nbspDia Ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko; eny, manandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana hanohitra ahy Hianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe;
&nbspKoa Izany no hiderako Anao eny amin'ny firenen-tsamy hafa, Jehovah ô, sy hankalazako ny anaranao.Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny Izy ary mamindra fo amin'ny voahosony, dia amin'i Davida sy ny taranany mandrakizay.
&nbspManao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny Izy ary mamindra fo amin'ny voahosony, dia amin'i Davida sy ny taranany mandrakizay.